LUGGOOYADEEDI ”Sheeko W.Q. Cabdulqaadir M. Mursal” |
LUGGOOYADEEDI ”Sheeko W.Q. Cabdulqaadir M. Mursal”
Abdulkadir Maxamed Mursal, CODKA QORAAGA, DIIRADDA MAANTA
Waa Xamar, waa 24 sano ka hor, waxaa ka bilowday waxyaabo aanan looga baran oo dadka ku cusub.
Waxaa socda madaafiic iyo rasaas nooc walba leh. Gawaaarida millateriga oo ay saaran yihiin ciidamo tuuteysan ayaa magaalada gees walba cararaya. Dad badan baa qaxaya oo u badan dadkii xoolaha lahaa, kuwo dawladda ku leh darajooyin sare oo ay ku jiraan xataa kuwa ciidamada.
Haween, carruur iyo waayeel oo aanan haysan gawaari ay ku cararaan, qaarkoodna aan socon karin baa lagu daabulayaa gaari-gacmeedyo iyo gaari-dameerro.
Liibaan waxaa riyo ku noqotay waxa dhacaya, marna kuma fekereyn inuu cararo oo qaxo wuxuuna niyadda ku hayaa ineyan waxan muddo dheer sii qaadan doonin iskana dhamaan doonaan oo ay wax walba sidoodi ku soo laaban doonaan.
Wuxuu Liibaan ahaa nin dhallinyaro ah oo aad u firfircoon dhallinyarada xaafaddiisa ka tilmaaman. Inkastuu Jaamacadda dhiganayay haddana wuxuu mar kasta taagnaan jiray Jiira Norway si uu u helo waddo uu waddanka uga dhoofo. Waxaa laga yaabaa dhallinyaro badan oo maanta joogtaa ineyan garan karin Jiiro Norwey(Jiiro Norwey) waxay ahayd goob dhallinyarada dhoofka rabtay ay isugu iman jireen oo ku taallay jaamacaddii Shabeelle agteeda, halkaasna laga raadiyo dariiqyo sida kuwa bugta ah ee maanta lagu dhoofo).
Liibaan oo xaafaddiisa ka yara fogeyd meelaha uu dagaalku sida xun uga socdo ayaa gurigiisa agtiisa waxaa yimid gawaari isugu jirta Lankuruserro iyo kuwo kale oo millaterigu leeyahay oo ay saaran yihiin ciidamo aad u hubeysan oo tuuteysan , dabadeedna xaafaddii ayay afarta gees ka xireen.
Waxaa guriga Liibaan orod ku soo gashay Fallis oo ah Liibaan walaashii oo reerkooda ugu yar iyadoo oraneysa “ Askar badan baa timid reer Xaashina wey qaxayaan” waxayna Fallis intaa raacisay “Hooyo maxaan sugeynaa maan innaguna qaxno, dadkoo dhanba wey qaxayaan oo cararayaane?” Liibaan hooyadii oo aan wax kuleyl ahba ku hayn waxa ay sheegeyso gabadha ayaa tiri ” Naa meel iga fariiso meel aan u qaxaaba garan maayee.”
Liibaan oo erayadaas maqlayay damcayna inuu debadda u soo baxo si uu arko waxa dhacaya, hase yeeshee markii uu furay albaabka baa askari haysta qori daba-miinshaar ah ku haddiday inuu albaabka xiro, debaddana u soo bixin. Albaabkii ayuu dib u xiray hase ahaatee meel daloosha ayuu ka eegayay dhaqdhaqaaqa meesha ka socoda. Waa dhab, waxaa alaabtoodii raranaya reer Xaashi oo ay muddo dheer daris ahaayeen qoyska Liibaan. Xaashi waa sarkaal sare ee ka tirsan ciidamada millateriga.
Liibaan oo ku dheygagay waxa ka dhacaya xaafaddooda ayaa waxay ishiisu qabatay Saytuun Xaashi oo marba dhinac u carareysa oo alaabta wax ka rareysa. Arrintan waxay Liibaan ku abuurtay culeys uusan haba yaraatee ka dareemin dagaalka socda. Saytuun waa middii uu darteed u dhoofi lahaa si ay nolol u wadaagaan, kuna ballameen iney is guursadaan. Saytuun waa midda darteed u maalin walba uu u taagnaa Jiiro Norwey si uu u helo waddo uu ku dhoofo. Haddii uu la hadli lahaana nin qori weyn haystaa baa albaaka ku gudban oo yiri “ Car fur albaabka”. Intuu adkeysan waayay buu daloolkii ka qaylshay oo yiri “ Saytuun…Saytuun”. Gurigeedii ayay dib u gashay oo ma ayan maqlin, waxayna sii wadatay hawsheedii.
Mar kale ayay Saytuun gurigii ka soo baxday iyadoo ay wada socdaan hooyadeed iyo walaalkeed. Liibaan wuu is hayn waayay oo mar kale ayuu si aada u qayliyay oo yiri “ Saytuun….Saytuun” Markan wey maqashay waxayna u soo carartay xaggiisa, isaguna wuxuu furay albaabkii wuxuuna damcay inuu albaabka furo oo xaggeedana u soo cararo, hase ahaatee mar kale ayaa la siiyay digniin culus oo la yiri “ Ha soo dhaafin halkaas”. Saytuun ayaa cod dheer ku tiri” Daa”.
Liibaan oo hadalka Karin oo neef guraya ayaa yiri” Maad Saytuun iska joogtaan, maxaad u baxeysaan?” Aabe ayaa sidaa yiri ee maxaan yeelaa?”ayay Saytuun jawaab degdeg ah ku bixisay. Iyagoon hadalkii kala bogan baa Saytuun lagu qayliyay oo la yiri soo dhaqaaq, waxayna tiri iyadoo sii degdegeysa “Baraawaan tegeynaa markii ay xaaladdu negaatana waan isu iman doonaa haddii Alle idmo, waxayna degdeg ku fuushay Laankurusarkii, weyna dhaqaaqeen gawaaridii.
Liibaan wuxuu dib sii eegayay gawaaridii oo dhamaantood si xawli ah u wada dhaqaaqay, wuxuu iska fariistay gidaar gaaban oo gurigooda ku hor yiillay.
Hooyadii ayaa debadda u soo baxday markii ay meesha firaaqowday, waxayna la hadashay Liibaan oo ku tiri “hooyo guriga soo gal xaal ma same”.
Dadkii xaafaadda ee dariska lahaa ayaa iyaguna qaarkood debadda u soo wada baxay iyagoo labo-labo u wada sheekeysanaya, rasaastuna la wada maqlayo. Dadku waxaa ku abuuran walaac iyo cabsi oo cidey u qorsheysan tahay waxa ay yeelayaan ma jirto.
Liibaan isago caga jiidaya ayuu guriga hore u galay, waxaa la soo dersay feker dheer mana uu garanayo waxa uu yeeli doono.
Libaan feker dheer baa la soo dersay, dagaalkuna dhamaad ma leh oo midba mid buu u sii dhiibay. Liibaan wuxuu waayay Saytuun warkeedii, waxayna ku noqotay nabar beerka kaga yaal.
Markii ay hakadeen dagaallaadii Muqdisho ee afarta bilood ayuu go`aansaday inuu raadiyo Saytuun meel kasta oo ay dunida ka joogto haddii ay nooshahay. Markii ay walidkii la yaabeen heerka uu marayo wiilkooda ayay iibsheen dhul ay lahaayeen si ay ugu raalli geliyaan Liibaan oo isagu taas codsaday si uu uga dhigto sahay safar.
Libaan wuxuu maray Jubbada Hoose, Dhexe, Kenya, Itoobiya, Jabuti iyo meel kale. Wuxuu la kulmay xanuun, gaajo, xarig iyo lacag la`aan.
Muddo afar sano ah buu Liibaan bilba meel joogay. Waxaase intaasoo dhib ahi uga sii darraa markii meelihii uu marayay qaarkood looga sheegay iney Saytuun ku dhimatay is rasaaseyn dhex martay ciidamadii qoyskeeda la socday iyo kuwo jidka u sii galay, hase ahaatee taas Liibaan ma rumeysan wuxuuna iska sii watay socodkiisa daalka iyo rafaadka badnaa.
Qoyska Liibaan oo iyaguba markiiba waayay halka uu ku dhibcay Libaan, hooyadiina habeen iyo maalin bay bilowday iney baafiso Liibaan. Muddo lix sano ah ka dib ayaa Liibaan warkiisii la helay isagoo jooga magaalada Addis sabab. Liibaan walaashiis ka yar oo iyadu labo sano ka hor gashay dalka Sweden ayaa heshay warkiisa ka dib markii ay u sheegeen dhallinyaro kale oo joogtay Itoobiya una dhooftay dalalka Yurub.
Markaas ka dib ayay Liibaan walaashii xiriir fiican la soo sameysay walaalkeed, una bilowda biil uu ku sii degganaado halkaa, una soo dirtay dal ku gal halka ay joogtay ah. Liibaan wuxuu markii hore ee loo soo jeediyay inuu ka samro gabadhaas, iskana dhoofo oo walaashii Fiisaha ay u soo dirtay aqbalo, hase ahaate isla hadal badan ka dib wuxuu Liibaan oggolaaday inuu iska dhoofo iyadoo ay dhib ku tahay haddana doorasho kale oo saddexaad waa u muuqan weyday.
Liibaan ka feker dheer ka dib wuxu go`aansaday inuu iska dhoofo hase ahaatee aanu joojinin baadigoobka iyo baafinta Saytuun. Liibaan wuxuu soo aaday garoonka diyaaradaha si uu u dhoofo ee uu ugu biiro walaashiis.
Liibaan isagoo joogo garoonka dayaaradaha ee Addis Abeba, soona dhameystay waraaqihiisii socdaalka, fadhiyana kuraasta nasashada ayuu samaacadda ka maqlay iyadoo loo yeerayo Saytuun Xaashi oo la leeyahay”Saytuun Xaashi fadlan la soo xiriir xafiiska socdaalka”. Liibaan dhulka iyo cirka la wareegay, meeluu jooguu garan waayay.
Liibaan wuxuu is yiri ” Bal wax hubso, armey magaca isaga eg yihiin” . Liibaan wuxuu soo aaday xafiiska looga yeera Saytuuun, albaabkana isagaaba uga sii horreeyay…..waaba tan, waa iyadiiyoo isbeddel weyn uu ka muuqdo. Ooyin buu is hayn waayay, labada lugood buu intuu kala bixiyay buu yiri” SAYTUUN MA NOOSHAHAY, MA SAX BAA WAXAY INDHAHAYGU ARKAAN? SAX MIYAA MA ADIGII BAA? WAXAAN ARKAA MA ADIGAA?. Markii uu intaasoo erey uu is daba dhigay oo ay Saytuun soo eegeyso buu yara aamusay.
Intey hoos u eegtay bay Saytuun si fudud u tiri” Waan ka xumahay kuma aqaan, malaha qof kalaad igu khaldeysaa” Waxayna hore u gashay xafiiskii looga yeeray, kumana daahine si dhaqsaa bay ugaga soo baxday, iyadoon u istaagin bayna Liibaan hareer martay, socodkeediina iska sii wadatay.
Liibaan kama uusan harin ee waa dabagalay isagoo leh” Saytuun i dhegeyso, Saytuuney maad ii istaagtid oo i maqashadi, Saytuun maruun ii istaag”. Liibaan dhowr tallaabo ka dib ayuu istaagay markii uu arkay sida ay isaga dhega tireyso.
Libaan waxaa u muuqday nin dheer oo xoog leh oo timo xiiran xambaarsanna ilmo yar, kaasoo ku leh Saytuun ” Soo dhaqaaq waqti ma harine, gacanta ayayna ka sii qabsatay iyadoon haba yaraatee dib soo eegin.
Liibaan oo cagaha jiidaya, boorso yarna dhulka ku jiidaya ayaa wuxuu dib ugu laabtay kuraastii nasashada. Libaan isagoo ilmeynaya dibna u xusuusanaya dhibkii muddadii sanooyinka ahayd ayuu gondaha is geliyay isagoo ilmeynaya, illaabayna inuu isaguba uu ku qornaa dayaaradda si uu u dhoofo. Saacado dheer ka dib isagoon is ogeyn miyir doorsoomay ayaa waxaa u timid gabar ka shaqeyneysay nadaafadda garoonka oo tiri meesha waan hagaajinayaa ee fadlan ii fasax. Liibaan oo ay dayaaraddii ka tagtay ayaa boorsadiisii dib u soo jiitay, kana baxay garoonkii.
W.Q. Cabdul qaadir Maxamed Mursal